काठमाडौंमा कोठा/फ्ल्याट चाहियो ? घरभेटी डटकमले दिदैछ समाधान - Living with ICT
Home / Featured / काठमाडौंमा कोठा/फ्ल्याट चाहियो ? घरभेटी डटकमले दिदैछ समाधान
काठमाडौंमा कोठा/फ्ल्याट चाहियो ? घरभेटी डटकमले दिदैछ समाधान
Shiva Basnet Oct 14, 2017	Leaveacomment
काठमाडौंमा वर्षमा ३ लाखभन्दा बढी मानिस भित्रिन्छन् । यसले शहर व्यवस्थापनमा दिनप्रतिदिन जटिलता थपिरहेको छ । मानिसहरुको अत्याधिक चापकै कारण घर, अफिसका लागि भने जस्तो फ्ल्याट र कोठा पाउन मुस्किल परिरहेको छ ।
यही समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न घरभाडा लिन र दिन मिल्ने सुविधासहित आइटी कम्पनी सफ्टेक फाउन्डेशनले www,gharbheti.com सुरु गरेको छ ।
यसले काठमाडौंमा बिल्डिङ, फ्ल्याट, कोठा, स्पेस, अपार्टमेन्ट, होस्टेल आदि अनलाइनबाटै खोज्न र सम्पर्क गर्ने सुविधा ल्याएको छ । घरभेटीका सिइओ राजन दाहाल भन्छन्, ‘घरभेटी डटकम कोठा, घरभाडा लिन र दिन सकिने अनलाइन पोर्टल हो । नेपाली समुदायमा स्मार्ट सिटीको चर्चा र परिकल्पना गरिरहँदा कोठा या घर भाडामा खोज्नका निम्ति घर–घर, सडक–सडक चहार्दै कोठा भाडा छ, भनि हिँडिरहनु भनेको स्मार्ट सिटी भन्ने शब्दकै उपहास गरेको देखिन्छ । तसर्थ उक्त पीडादायी समस्या र समयको दुरुपयोग नहोस् भननका लागि घरभेटी डटकम अत्यन्त प्रभावकारी वेबसाइट हो ।’
घरभेटी डटकमले घरबेटीलाई आफ्नो कोठा, फ्ल्याट, घर खाली भएको जानकारी घरभेटी डटकममा गएर राख्न सक्नेछन् भने कोठा खोज्नेहरुले आफूले खोजेको किसिमको कोठा सहजै छनौट गरी बुक गर्न सक्नेछन् ।
घरभेटी डटकम एउटा यस्तो पोर्टल हो, जसमा घरभाडा लिन र दिनका निम्ति मानिसहरु आउनेछन् । एउटा ठूलो समस्या समाधान हुनेछ । कोठा वा घर महिनौंसम्म खाली रहेर घरभेटीको आम्दानी घट्छ भने कोठा वा घर खोज्ने मान्छेले पनि दुःख पाइरहेका छन्, खोजे जस्तो कोठा भेटिरहेका छैनन् । उक्त समस्याको समाधान हुनेछ भने आर्थिक वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्नेछ । यस समस्याको समाधान दिनु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
घरभेटी डटकम फ्रि र पेड दुवै किसिमको सर्भिस उपलब्ध छ । sponsored listing, premium listing र featured posting मा property list गर्नका निम्ति घरभेटीलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ भने general listing मा पैसा तिर्नुपर्दैन। साथै कोठा, घर खोज्ने व्यक्तिलाई सेवा निःशुल्क छ । कोठा खोज्न चाहनेले कोठाको प्रकार (विल्डिङ रुम, फ्ल्याट) पैसा र ठाउँको आधारमा खोजी गर्न सक्नेछन् ।
अब ठूलो समस्याको समाधान भएन त ? साथै घरभेटी नामको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर पनि चाहेको जस्तो कोठाको notification / details थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ।
घरभेटी डटकममा post your property मा गएर registration form भरी एउटा अकाउन्ट क्रेट गरिसकेपछि आफूसँग भएका कोठा, घर, फ्ल्याटहरुको विवरण, भाडादर, सुविधाहरु र फोटोहरु राख्न सक्नेछन् ।
घरभेटी डटकममा notify room भन्ने एउटा यस्तो फिचर छ जुन आजको मानिसहरुको कोठा खोज्ने समस्याको समाधान हो । तपाई कहिँ कुनै घर या फ्ल्याटमा बसिरहनुभएको छ तर केही दिन वा महिनामा कोठा सर्नुपर्ने छ भने तपाई घरभेटी डटकमको notify room मा गएर तपाईं कुन–कुन ठाउँमा कोठा चाहनुहुन्छ, कुन प्रकारको (विल्डिङ रुम, फ्ल्याट) र कतिदेखि कति रुपैयाँ सम्मको कोठा चाहनुहुन्छ उक्त विवरण भरिदिए पछि घरभेटी डटकमले तपाईंलाई इमेलमा तपाईंले खोजेको जस्तो कोठा, खोजेको ठाउँमा भएको जानकारी गराइदिन्छ ।
यस कम्पनीले एजेन्सीमार्फत नेपालका महानगर र उपमहागरमा पनि उक्त सुविधाहरु उपलब्ध गराउन लागेकाे छ । ‘तिहारपछि देशका अन्य महानगर र उपमहानगरका कोठा र घर खोज्न सकिनेछ,’ दाहालले भने ।
Previous टेलिकमले सुरु गर्यो सोधपुछ तथा ग्राहक सेवा केन्द्र
Next पोखराको बगरमा वल्र्ड लिङक कम्युनिकेशनको अर्को शाखा